PCD diamond maka iwepụ mkpuchi ndị na-emepụta na ndị na-ebubata | China Diamond PCD maka iwepụ ụlọ ọrụ mkpuchi mkpuchi
7 inch PCD iko Wheel maka Epoxy, gluu, mwepu agba
PCD diamond egweri iko wheel e mere maka ngwa ngwa n'ala mkpuchi mwepụ, ọ bụ nkọ na inogide. agaghị ebuli ma ọ bụ mebie mkpuchi ahụ dị ka wheel iko diamond ọdịnala, ọ bụghị naanị na ha nwere ike ịchekwa ego gị kamakwa oge.
Trapezoid kewara pcd diamond na-egweri akpụkpọ ụkwụ maka iwepụ epoxy
Enwere ike iji efere egweri Split PCD maka iwepụ na igwe ihe mmiri ozuzo mebiri. Akpụkpọ ụkwụ PCD Split na-egweri nwere ike wepu ncha nke fọdụrụ n'elu ala simenti. Enwere ike iwepụ ahịrị ebe a na-adọba ụgbọala ochie site na ụdị trapezoid PCD kewara ekewa.
7 inch Epoxy Glue Paint Mwepụ PCD Diamond Cup egweri Wheel for Angle grinder
PCD Diamond Cup Wheels na-akpa ike na-ewepụ epoxy, urethane, mastic & ihe mkpuchi ihe na ọnụego mwepụ kacha. Nnukwu diamond gburugburu nkeji iri na ise na imewe akụkụ tct, na-enye ọrụ ịhịa aka n'ahụ kwụsie ike ma na-egbochi ọnwụ diamond na-ebuga arụmọrụ dị elu & ogologo ndụ.
Ngwa PCD diamond na-egweri ihe eji eme ihe PCD maka mwepu agba epoxy glue
Nke a trapezoid PCD egweri akpụkpọ ụkwụ e mere maka ngwa ngwa na ike-egweri na ala mkpuchi. Akụkụ 2 nke ọkara gburugburu PCD nwere ike wepu exploy, agba, gluu, mkpuchi elastometric, wdg. Na nke a imewe nwere magburu onwe nkọ na elu ndụ.
Ngwa lavina pcd diamond egweri paịlị maka lavina grinder
Akpụkpọ ụkwụ Lavina na-egweri na 5 PCD Segments na 1 nchebe nke dị irè maka ngwaahịa ike ike na iwepụ mkpuchi. Ha na-enyere gị aka ịrụ ọrụ ahụ ngwa ngwa ma tinyekwuo ego n'akpa gị na ọrụ ọ bụla. Ha dị na nhọrọ ntụgharị aka ekpe ọkọlọtọ na aka ekpe
HTC PCD diamond egweri akpụkpọ ụkwụ maka mkpuchi mkpuchi
PCD-egweri mpe mpe akwa, na-eji wepụ ihe niile ụdị mkpuchi dị ka agba n'elu ala.Na elu oru oma maka ndị kasị sie ike ọnọdụ.This PCD-egweri mpe mpe akwa bụ maka HTC igwe. Ọ nwere ike dabara niile ụwa dum n'ala-egweri macines na njide ma ọ bụ mgbe customization.Anyị na-enye customization ọrụ.
Ngwá Ọrụ Nkwadebe dị n'elu Redi Lock Husqvarna PCD na-egweri akpụkpọ ụkwụ
Redi Lock Husqvarna PCD na-egweri akpụkpọ ụkwụ iji wepụ ụdị mkpuchi ọ bụla dị ka screed residue, mastic n'ala. Na elu ịrụ ọrụ nke ọma maka ndị kasị sie ike ọnọdụ. PCD diamond egweri mpe mpe akwa bụ maka igwe Husqvarna. Anyị na-enyekwa ọrụ nhazi iji mezuo ihe ọ bụla chọrọ.
Ngwa Lavina Concrete Prep PCD-egweri Scraper maka Mwepụ mkpuchi mkpuchi Epoxy Glue
PCD egweri Scraper wepụ niile ụdị coatings dị ka epoxy,acrylic na floor.Sharp na wear-eguzogide ọgwụ na elu ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na ndị toughest ọnọdụ.This egweri scraper bụ maka Lavina machine.It nwere ike dabara niile ụwa dum n'ala-egweri ígwè ọrụ na. njide ma ọ bụ mgbe customization.
PD50 PCD diamond egweri nkwụnye maka mwepu mkpuchi ala ihe
PCD Diamond Grinding Plug ewepu ụdị mkpuchi ọ bụla dị ka agba,varnish na ala.Na-arụ ọrụ dị elu maka ọnọdụ kachasị njọ.Broad nso nke njikọ na-enweta ikike kachasị maka nkwadebe ala.Aggressive na ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na ihe eji eme ihe.Wet ma ọ bụ Dry use.Provide ọrụ nhazi.
3-M6 Trapezoid PCD Akụkụ Diamond egweri akpụkpọ ụkwụ
Trapezoid PCD Nkeji Diamond egweri akpụkpọ ụkwụ iji wepụ ihe ọ bụla ụdị mkpuchi: epoxy, agba, gluu, etc.With elu ịrụ ọrụ nke ọma maka ndị kasị sie ike ọnọdụ.The 3-M6 trapezoid diamond akpụkpọ ụkwụ nwere ike dabara na maka Sase, Diamatic na ụdị nile nke ala. igwe-egweri.Anyị na-enyekwa customization ọrụ.